Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံမှ The Rt Hon. the Lord Darzi of Denham OM KBE ထံသို့ဝမ်းမြောက်ကြောင်းသဝဏ်လွှာပေးပို့
(၅-၇-၂၀၁၉ ရက်၊ လန်ဒန်မြို့)ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ်နှင့် The World Innovation Health Summit ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ The Rt Hon. the Lord Darzi of Denham OM KBE အား ဂျပန်ဘုရင်မှ အပ်နှင်း‌သော Order of the Rising Sun ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှပေးပို့သည့် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁ဝး၃ဝ) နာရီ တွင် St Mary’s Hospital ရှိ ၎င်း၏ရုံးခန်း၌ ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စွာမင်းက သွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။